ကိုယ်လေ ဒီနေ့ အတန်းထဲမှာ အီရတ်စစ်ပွဲရဲ့ စစ်မြေပြင်ကို ရိုက်ပြထားတဲ့ အခွေကိုကြည့်ခဲ့ရတယ် ။ အဲ့ဒီအခွေက အီရတ်စစ်ပွဲအတွက် စစ်မြေပြင်ကို စေလွတ်ခြင်းခံရတဲ့ အမေရိကန်စစ်သားတွေက မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ အခွေပေါ့။ စစ်မြေပြင်က တကယ့်အခြေအနေတွေ ၊ သူတို့မိသားစုတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေ ၊ စစ်တိုက်သွားကြတဲ့ သူတို့တွေကိုယ်တိုင်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ရိုက်ပြထားတာ ။ ကိုယ်ဖြင့် ကြည့်နေရင်းနဲ့ မျက်ရည်တောင်ကျမိတယ် ။
စဉ်းစားကြည့်ပါအုန်း… အီရတ်နိူင်ငံက အပြစ်မဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေက ဗုန်းတွေ ကျည်ဆံတွေကြားမှာ ရှင်သန်နေရတာ ။ အသက်ကို ဖက်နဲ့ထုပ်ထားရတဲ့ အခြေအနေမျိုး၊ ပြီးတော့ အဲ့ဒီဖက်ကလေးက အချိန်မရွေး ပေါက်ပြဲစုတ်ပြတ်သွားနိူ်င်တာနော် ။ ကျီးလန့်စာစားတယ်ဆိုတာ အဲ့လိုအခြေအနေပဲဖြစ်မှာလို့ ကိုယ်စိတ်နှလုံးတွေ ချိနဲ့စွာနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာပေးလိုက်မိတယ် ။ အော်… သူတို့တွေရဲ့ဘဝက ကိုယ်တို့တွေလို အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ကျောင်းလေးတတ် အလုပ်ကလေးလုပ် အပျင်းပြေသီချင်းလေးနားထောင် ဘယ်မှာသွားလုပ်နိူင်မှာလဲလို့လေ ။ ဟော… ကျန်တဲ့တဖက်ကိုလဲ ငဲ့ကြည့်လိုက်ပါအုန်း ။ စစ်မြေပြင်ကို ထွက်သွားတဲ့ ဖခင်အတွက်၊သားအတွက်၊လင်ယောကျာင်္းအတွက် ရတတ်မအေးရတဲ့ ကျန်ရစ်တဲ့မိသားစုရဲ့ ဒုက္ခ ၊ အခန့်မသင့်ရင် သူတို့မိသားစုလေးတွေ နောက်ထပ် ထပ်ဆုံတွေ့ဖို့ဆိုတာ ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိူင်တော့တဲ့ထိ ရင်နာဖွယ်ရာ အဖြစ်ဆိုးကြီးတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နိူင်တာမျိုးလေ ။ အဲ့တော့ ဘယ်မှာလာ ရတတ်အေးနိူင်မလဲနော် ။ ဘယ်တော့ပြီးဆုံးမယ်မှန်းမသိတဲ့ စစ်ပွဲအတွက် သားပစ်မယားပစ်နဲ့ ကိုယ့်အသက်ကို ကာကွယ်ဖို့ တခုတည်းအတွက် မသတ်ချင်ချင် သတ်ချင်ချင် မပစ်ချင်ချင် ပစ်ချင်ချင် မဲမဲမြင်ရုံနဲ့ အကုန်ပစ်နေခတ်နေရတဲ့ စစ်မြေပြင်က စစ်သားတွေရဲ့ဘဝ ကကော ဘာထူးလဲ ………
ကိုယ်ဖြင့် ဘာလို့များ ဒီကမ္ဘာကြီးထဲမှာ အဲ့လို ဘယ်သူ့အတွက်မှ ကောင်းကျိုးကို မသယ်ဆောင်ပေးတဲ့ စစ်ပွဲတွေကို တခုပြီးတခု ဆင်နွဲနေကြသလဲဆိုတာကို ဘယ်လိုမှ အဖြေထွက်အောင် မစဉ်းစားတတ်ဘူး ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကိုယ်တွေရဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ အာဏာကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ရက်ရက်စက်စက် တိုက်စေခိုက်စေကြတဲ့ စစ်ပွဲကြီးတွေကြောင့် အပြစ်မဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေ အစတေးခံသွားရတာ မနည်းမနောပါ ။ ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘဝကို အဲ့လို စစ်သံဗုံးသံတွေကြားမှာ ဘယ်သူမှတော့ ကုန်ဆုံးချင်ကြမှာ မဟုတ်ဘူးနော် ။
ကိုယ်လေ အဲ့ဒီအခွေကို ကြည့်ပြီး ရင်ထဲမှာ နှုန်းချိနဲ့နေအောင် ခံစားရတယ် ။ “စစ်ပွဲကြီးတွေကို ဘာမှမဖြစ်သလို ဆင်နွဲဖို့ အမိန့်တွေကို မိန့်မိန့်ကြီးထုတ်နေကြတဲ့ နိူင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရယ် … ရှင်တို့မှာ ကြင်နာတတ်တဲ့ နှလုံးသားလေးများရှိရင် သူတို့လေးတွေရဲ့ ဘဝကို တခဏပဲဖြစ်ဖြစ် ဝင်ရောက်ခံစားကြည့်ကြစမ်းပါ” လို့ ကိုယ်တော့ သူတို့တွေကြားအောင် အကျယ်ကြီးအော်ပြောပစ်လိုက်ချင်တာပဲ ။ ဒါပေမဲ့လဲလေ သူတို့တွေ ကြားနိူင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ကြားမှာလဲမဟုတ်ပါဘူး ။ ကြားအောင်လဲ နားစွင့်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဟုတ်တယ်လေ…သူတို့တွေမှာ ကိုယ်တို့တွေ အော်တာကို ကြားနိူင်လောက်တဲ့ ကြင်နာတတ်တဲ့ နားမှ မရှိဘဲ ။ စာနာသနားတတ်တဲ့ နားမှမရှိဘဲ ။ လူသားဆန်တဲ့ နားမှမရှိဘဲ.......
ထားပါလေ... သူတို့တွေကို အပြစ်တင်လဲ ဘာမှမထူးမဲ့အတူတူ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ကိုယ်တိတ်တိတ်ကလေး ဆိတ်ငြိမ်စွာ ဆန္ဒပြုမိပါတယ် ။ အဲ့လို စစ်ကြီးတွေကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ ကယ်ကူရာမဲ့နေတဲ့ဘဝတွေကို ကယ်တင်နိူင်ပါရစေ ။ အထူးသဖြင့် အနာဂတ်ရဲ့ လမ်းပျောက်နေတဲ့ ကြယ်ပွင့်လေးတွေကိုပေါ့ ။ ပြီးတော့လေ ကိုယ်ဆက်ဆုတောင်းမိပါတယ် ကိုယ်တို့ကမ္ဘာမြေကြီးအေးချမ်းပါစေ ။ လူသားတွေအတွက် ကောင်းကျိုးမပေးတဲ့ နှလုံးသားမဲ့တဲ့ စစ်ပွဲကြီးတွေ အမြန်ဆုံး အဆုံးသတ်ပါစေလို့ပေါ့ ။ ကိုယ့်ဆန္ဒပြုသံဟာ တိုးတိုးတိတ်တိတ်လေးပါ … ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရင်ထဲအသဲထဲမှာ သံမှိုရိုက်လိုက်သလိုပဲသိပ်ခိုင်မာတယ် ။ ကိုယ်ဒိထက်ပိုပြီးစာကြိုးစားရမယ်နော် ။ ကိုယ်ကိုယ့်ကိုအရင် ထူနိူင်မတ်နိူင်မှ တပါးသူကို တွဲထူနိူင်မယ်လေ ….မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကတော့HEAL THE WORLD တဲ့....ကိုယ်သိပ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းလေးပေါ့ ။ ကိုယ်တို့တွေလဲ ကိုယ်တို့တွေ တတ်နိူင်တတ်ဘက်က ပါဝင်ကြတာပေါ့ ။ ကမ္ဘာမြေကြီးလဲ .ငြိမ်းချမ်းပါစေ ။ လူသားတွေလဲ အကြင်နာတရားတွေ တိုးပွားကြပါစေ.....
စာကြွင်း ။ ။သီချင်းကိုယူကျူ့ကယူပါတယ် . သီချင်းတင်နည်းသိအောင် ပြောပြတဲ့ ကိုနွယ်ရိုး ကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 8:53 PM 1 comments
ကိုယ်ဒီရက်ပိုင်းတွေ စာရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ အတွေးတွေထဲမှာသာ ခဏခဏ ချရေးနေတာ လက်တွေ့မှာခါကျ မရေးဖြစ်ဘူး။ ကျောင်းစာတွေနဲ့ ရှုပ်နေတာလဲ ပါပေမဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ နဲနဲ အပျင်းကြီးနေမိတာ ပါပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့တော့ ရေးဖို့ အကြောင်းကလည်းဖန်လာတော့ အမှတ်တရ အနေနဲ့ ရေးဖြစ်အောင်ချရေးလိုက်မိပေါ့။
ကိုယ်ဒီမနက် အလုပ်သွားတော့ ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံး မြူနှင်းတွေနဲ့ မှုန်နေတာပဲ ။ ဆောင်းမနက်ခင်း ဆိုတာမျိုးဟာ နွေမနက်ခင်းတွေထက်တော့ ပိုမှောင်နေတတ်တယ်လေ ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ခါကျ မြူတွေမှုန်နေအောင် ကြနေတာတောင် ရာသီဥတုက ကြည်လင်နေလို့ ထင်ပ ကောင်းကြည်ကြီးကကြည်လို့ လှလို့ ။ မြူတွေကတော့ ဘယ်လောက်ထူပိန်းနေအောင် ကျသလဲဆိုရင် ကိုယ့် နဲ့ ၂ပေပတ်လည်အကွာလောက်ကိုပဲ ကိုယ်ကောင်းကောင်းမြင်ရတာ ။ အဲ့ဒါတောင် မှုန်မှုန်မှိုင်းမှိုင်းရယ် ။ မြင်ကြည့်စမ်းပါအုန်း မျက်စိထဲမှာ မြူနှင်းတွေ ဝေနေအောင် ကျထားတော့ ပေတရာလမ်းမကြီးက နှင်းရေတွေနဲ့ စိုစိုရွဲလို့ပေါ့ ။ ကိုယ့်ဘေးဘီက ကိုယ်မြင်နေရတဲ့ တိုက်ကြီးတွေရယ် သစ်ပင်ကြီးတွေရယ် ဓါတ်မီးတိုင်က မီးမှိန်မှိန်ပြပြလေးရယ်က အရိပ်ရေးတဲ့ ပန်းချီတချပ်လိုပဲ သိပ်လှတာ ။ အဲ့ဒီအလှကို ကိုယ့်ဦးခေါင်းထက်က အပြာရောင်ကြည်လဲ့လဲ့ နဲ့ တခြမ်းပဲလလေးရှိနေတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးက ပိုပြီးပြည့်စုံအောင် လုပ်ပေးနေသေးတာ ။ ကိုယ်ခါတိုင်းထက် စက်ဘီးကို ဖြေးဖြေးလေးနင်းတယ် ။ ချမ်းချမ်းစီးစီးရှိလှတဲ့ ဆောင်းရယ် နှင်းမြူတွေ မှိုင်းပြီး မှုန်နေအောင် လှပတဲ့ မနက်ခင်းလေးကို ကောင်းကောင်းခံစားဖို့ပေါ့ ။
ကိုယ်ဒီမြို့လေးကို သိပ်ချစ်တာပဲ ။ ခုဆိုကိုယ် ဒီမြို့လေးမှာ နေတာ ဘာလိုလိုနဲ့ လေးနှစ်ပြည့်တော့မယ် ။ ကိုယ်ဒီမှာ ကျောင်းတတ်မယ်လို့ ရွေးချယ်လိုက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးက ကန့်ကွက်ကြတာ ။ ဟွန့်... တောကြီးပါတဲ့ .. ဟုတ်မှာပါ ။ တိုကျိုလိုမြို့ကြီးတွေနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ တောပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က တောသူမို့လားမသိပါဘူး ။ တိုကျိုလို နေရာမျိူးမှာ အသက်ခဏရှုရရင်တောင် မွန်းပြီးမောချင်တယ် ။ ကားတွေရှုပ် ၊ လူတွေရှုပ် ၊ တိုက်ကြီးတွေကလဲ ပြွတ်သိပ်ခတ်လို့ မိုးထိုးနေတာ ။ တိုကျိုမြို့ကြီးရဲ့ လူနေသိပ်သည်းမှုနဲ့ မြို့ပြဆန်မှုက ကိုယ့်အတွက်တော့ လှပတဲ့ပန်းချီတချပ်ဖြစ်မနေဘူး ။ ပူလောင်လွန်းတယ် ရှုပ်ပွေလွန်းတယ်လို့ပဲ ကိုယ်တော့ ခံစားရတယ် ။ တခြားမပြောပါနဲ့ တိုကျိုမြို့ရဲ့ သိပ်သည်းမှုနဲ့ ပျားပန်းခတ်မှုကြောင့် ကောင်းကင်ကြီးတောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ်မနေရရှာဘူး ။ ဟုတ်တယ်လေ သူ့ကိုချောင်းကြည့် မျှော်ကြည့်နေကြတဲ့ တိုက်မြင့်ကြီးတွေက တနေ့တခြား များများလာတာကိုး ။
ကိုယ်တို့မြို့လေးခါကျ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး ။ လူနေမထူထပ်ဘူး ။ တိုက်အမြင့်ကြီးတွေ ဆိုတာလဲ မြို့နဲ့ပနံသင့်ရုံလောက်သာရှိတာ ။ ပြီးတော့ "လေ " "ရေ"ကအစ သန့်ရှင်းပြီး လတ်ဆတ်နေတာကော ။ ကိုယ်မှတ်မှတ်ရရ ဒီမြို့လေးကို တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဖို့ ၂၀၀၆ ဖေဖော်ဝါရီမှ စပြီးခြေချခွင့်ရတာပေါ့ ။ ကိုယ် အဲ့ချိန်ကတည်းက ဒီဒေသလေးကို ကျိတ်ပြီး သဘောကျနေမိတာ ။ဖေဖော်ဝါရီဆိုတော့ အချမ်းဆုံးအချိန်ပေါ့ ။ နှင်းတွေဆိုတာလဲ ဖွေးနေအောင်ကျနေတာ ။ ဟိုးအရင်က ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာသာမြင်ဖူးတဲ့ နှင်းတွေ ဖုန်းနေတဲ့ ငွေတောင်တန်းကြီးတွေရယ် ၊ ပြီးတော့ ဖွေးဖွေးဖြူနေတဲ့ ငွေရောင် သစ်ပင်ထိုးထိုးထောင်ထောင်လေးတွေရယ် ။ အဲ့တုန်းက အဲ့မြင်ကွင်းတွေကို ရထားပေါ်ကနေကြည့်နေမြင်နေရယုံနဲ့တင် ကိုယ့်မှာ ပျော်လိုက်တာ ။ စိတ်ထဲမှာလဲ ငြိမ်းချမ်းနေသလို ခံစားရတာ ။ ဆောင်းဆိုတာ ဒါမျိုးလားလို့ပေါ့ ။ ပီပြင်လှတဲ့ဆောင်းကို အပြင်မှာကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့ ဖီးလ်ဟာ ဘာနဲ့မှကိုမတူဘူးရယ် ။ ကိုယ်ဒီကျောင်းအောင်ရင်တော့ ဒီမှာပဲတတ်မယ်လို့ အဲ့ဒီကတည်းက တိတ်တခိုးလေး ကျိတ်ပြီး စဉ်းစားထားတာ ။
ခုကိုယ်နေတဲ့ မြို့လေးက ဂျပန်နိူင်ငံရဲ့ ဗဟိုချက်တဲ့တဲ့မှာရှိတာ .. မြို့လေးရဲ့ နာမည်က မာစုမိုတို တဲ့ ။ ပတ်ပတ်လည်မှာ တောင်တွေကာရံထားတဲ့ အေးချမ်းတဲ့ မြို့လေးပေါ့ ။ ရဲတိုက်အကြီးကြီး နဲ့ ပြတိုက်တွေ ၊ ဟိုးကတည်းကရှိခဲ့တဲ့ မြို့ဟောင်းဈေးတန်းလေးတွေ၊ သဘာဝအလှတွေကို အတိုင်းသား ပြုစုပျိုးထောင်ထားတဲ့ ပန်းခြံကြီးတွေ ၊ကလပ်စစ်ဂီတပွဲတွေ မကြာခဏလုပ်လေ့ ရှိတဲ့ သိပ်ပြီးအနူပညာဆန်တဲ့ မြို့လေးပေါ့ ။ တခါတခါ ကိုယ်သီချင်းလေးတပုဒ် ငြီးမိတယ် သိလား ... တောင်တွေကာရံထားတဲ့ အလယ်မှာ ..ဆိုပြီးလေ ။ အင်းလေးရေကန်သာတော့ မရှိပေမဲ့ သိပ်လှတဲ့မြို့လေးပေါ့ ။ အဲ့ဒါကြောင့်လဲ ၁၂ရာသီလုံး ခရီးသွားတွေနဲ့ပြည့်နေတာပေါ့လေ ။ အဲ....ကိုယ့်မြို့လေးအကြောင်းဆက်ပါအုန်းမယ် ။ ကိုယ်တို့မြို့လေးက ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၆၀၀မီတာကျော်မြင့်တဲ့ တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့လေးပေါ့ ။ အဲ့ဒါကြောင့်လဲ ဆောင်းတွင်းဆို အရိုးခိုက်အောင် ချမ်းတာနေမှာ ။ ပတ်ပတ်လည်မှာက စောစောက ကိုယ်ပြောသလို တောင်ကြီးတွေနဲ့ဝိုင်းထားတာ ။ အဲ့တောင်ကြီးတွေ့က မီတာ၃၀၀၀ အထက်မြင်တဲ့ တောင်တန်းကြီးတွေဆိုတော့ ကောင်းကင်ပေါ်ကကြည့်ရင် အိမ်တအိမ်ရဲ့ ခေါင်မိုးနဲ့တူသတဲ့ .. အဲ့ဒီလောက်တောင် တောင်ကြီးကြီးတွေက ကြီးကြီးမြင့်မြင့်ကြီးတွေ ။ အဲ့ဒီတောင်တန်းကြီးတွေကို အက်လ်ပတ်စ် တောင်တန်းလို့တောင် နာမည်ပေးထားတာ ။ ပြီးတော့ ကိုယ်တို့မြို့လေးကိုလဲ ဂျပန်နိူင်ငံက ဆွစ်မြို့လေးလို့ တင်စားပြီးခေါ်သေးတယ် ။ ရေခဲပြင်လျှောစီးလို့ ရတဲ့ စကိတ်ကွင်းတွေရယ် နှင်းတွေဖုံးနေတဲ့ ငွေရောင်တောင်ကြီးတွေရယ်ကြောင့်လို့တော့ ကိုယ်ထင်တာပဲ ။ ဒါကတော့တောင်တန်းကြီးတွေကို ကိုယ်တို့မြို့ကနေ လှမ်းမြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းပေါ့ ။
အဲ့ဒီတောင်တန်းကြီးတွေက နွေဆို စိမ်းစိုနေတာ ဟော...ခုလိုဆောင်းဝင်စအချိန်ကျ ကိုးရောလို့ခေါ်တဲ့ သစ်ပင်ကြီးတွေ အရောင်ပြောင်းမှုကြောင့် တောင်တကြောမှာ ဝါ၊စိမ်း၊နီ ကာလာချယ်ထားတဲ့ အတိုင်း သဘာဝပန်ချီကားကြီးတချပ်လို လှနေပြန်ရော .. အောက်ကပုံထဲမှာ မြင်ရသလိုပေါ့ ။ ခုလိုရာသီဆို ဘယ်နေရာကိုပဲ မျှော်ကြည့်လိုက် မျှော်ကြည့်လိုက် ကိုးရောတွေနဲ့ သိပ်လှတာ ။ ကိုးရောဆိုတာက သစ်ပင်တွေ အရောင်ပြောင်းခြင်း ၊ ဒါမမဟုတ် အရောင်ပြောင်းတဲ့ သစ်ရွက်တွေကို ခေါ်တာလေ ။ အဲ့ဒီအပင်တွေ အရွက်တွေက အဝါဆို တပင်လုံးက အဝါ ၊ အနီဆိုတပင်လုံးက အနီရောင်ပေါ့ ။ အဲ့လို အပင်တွေကို ဝါ၊စိမ်း၊နီ ဆိုပြီးများ စနစ်တကျ လှလှပပများ အကွက်ချ ပြီးစိုက်ထားသလားတောင် မသိပါဘူး ။ တောင်တကြောမှာ ကာလာစုံ အပြည့်ပဲဆိုတော့ မလှချင်မှအဆုံးပေါ့ ။ အဲ့ဒီ ကိုးရောရဲ့ အလှကို ခံစားဖို့ ခရီးထွက်တဲ့သူတွေ ကန့်မ် သွားတဲ့ သူတွေလဲ မနည်းမနောပါပဲ ။ ကိုးရောကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အပင်မျိုးကတော့ မိုမိဂျိတို့ ၊ ဂင်းနန်း တို့လို အပင်တွေပေါ့ ။ တခြားလဲ အများကြီးတော့ ရှိပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကတော့ ကိုးရောဆိုရင် မိုမိဂျိပင် နဲ့ ဂင်းနန်းအပင်လောက်သာ သိတယ် ။ အောက်ကပုံထဲက မြင်ရတဲ့ အနီရောင် အပင်ကတော့ မိုမိဂျိပင် ၊ တပင်လုံး လှနေရောင် ဝါနေတဲ့ အပင်ကတော့ ဂင်းနန်းလို့ခေါ်တဲ့ အပင်ပေါ့ ။
စကားလမ်းကြောင်းက ချော်သွားပြန်ပြီ ။ ဆက်အုန်းမယ် ကိုယ့်မြို့အကြောင်းကို ။ အဲ့ဒီတောင်ကြီးတန်းတွေက ဆောင်းကပိုပြီး ပြင်ပြင်လာပြီဆိုရင်တော့ စောစောတုန်းက ကိုယ်ပြောတဲ့ ကိုးရောလေးတွေခမျာ နေရာဖယ်ပေးရရှာတယ် ။ နှင်းတွေလာတော့မှာကိုး ။ ခုတောင် တောင်ကြီးရဲ့ တချို့နေရာတွေမှာ နှင်းဖြူဖြူတွေဖုံးနေတာကို ကိုယ်တို့မြင်နေရပြီလေ ။
ကိုယ်ကတော့ ဘာပဲပြောပြော ဒီဒေသလေးကို သိပ်ချစ်တယ် ။ အေးချမ်းလွန်းလို့လေ .ဒီအောက်ကပုံကတော့ ကိုယ်တို့မြို့ရဲ့ဂုဏ်ဆောင် ရဲတိုက်ကြီးပေါ့ ။ ကိုယ်ကတော့ အချိန်အားတဲ့အခါ ၊ ပျင်းတဲ့ အခါတွေမှာ အဲ့ဒီကိုသွား ခုံတန်းလေးပေါ်ထိုင်ပြီး လှပတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကို ငေးမောနေတတ်တယ် ။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ ကျောင်းအနောက်ဖက်က ချောင်းလေးနဘေးမှာ စာအုပ်လေးတအုပ်နဲ့ ရေစီးသံလေးနားထောင်ရင်း ၊ လတ်ဆတ်တဲ့ လေကို တဝကြီးရှုရှိုက်ရင်းပေါ့ ။
အင်း.....ဒါပေမဲ့ သိပ်မကြာခင်ပဲ ကိုယ်သိပ်ချစ်တဲ့ ဒီမြို့လေးကနေ ခွဲခွာရတော့မယ် ။ ကိုယ့်ကျောင်းက နောက်နှစ် ၄လပိုင်းဆိုပြီးတော့မယ်လေ ။ ကိုယ်ဆက်တတ်ချင်တဲ့ ဘာသာရပ်ရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်ရှိတဲ့ နေရာကို ကိုယ်ပြောင်းရတော့မယ် ။ ကိုယ်သိပ်ချစ်တဲ့ တောင်တန်းကြီးတွေ နဲ့ သာယာလှပလှတဲ့ မြို့လေးနဲ့ ခွဲခွာရမှာမို့ ကိုယ်ဝမ်းတော့နည်းမိတယ် ။ နှစ်သက်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ အချိန်တွေဆိုတာ အဲ့လိုပဲ အကုန်မြန်တတ်သလား မသိနော်...။ ကိုယ်ဒီမြို့လေးကို လွမ်းနေမယ်ဆိုတာလဲ အသေအချာပြောရဲပါတယ် ။ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ အမြဲတမ်း ရှုပ်ရှုက်ခတ်ပြီး ပူလောင်နေတာလေ ။ လူတွေနဲ့ မကင်းနိူင်သရွှေ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ပူလောင်မှုတွေ့နဲ့ ထိတွေ့နေသရွှေ့ကတော့ ကိုယ်ဒီလိုပဲ အေးချမ်းသာယာပြီ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လှတဲ့ မြို့လှလှလေးတွေကို မွတ်သိပ်စွာ တောင့်တနေမိအုန်းမှာပါပဲ ။
စာကိုး ။ ဂူဂယ် နဲ့ ဒီမြို့ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ထဲက ပုံတချို့ယူပါတယ် ။ အချက်အလက်တချို့ကတော့ ဝီကီပီဒီယာကပါ ။
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 10:12 AM3comments
ချစ်တေးရယ် ကျူးမိတယ် .....
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 7:20 AM0comments
အဆိုတော် ကိုအောင်ကတော့ " ကြယ်တွေစုံတဲ့ည အမေ့အိမ်ကိုလွမ်းတယ် " တဲ့အမေ ။ ဒီည ကြယ်တွေမစုံပါဘူး အမေရယ် ... ဒါပေမဲ့ အမေ့ကို သမီးလွမ်းနေတယ် ... အမေ ။ ဒီရက်ပိုင်းမှာ အမေ့ကို သိပ်...သတိရတာပဲ အမေ ။ အမေ နေကောင်းကျန်းမာမှ ရှိရဲ့လား ။ အမေ အလုပ်တွေသိပ်များပြီး ပင်ပန်းများနေပြီလား ။ အမေ ဘုရားသွားကျောင်းတတ် ဥပုသ်သီတင်း သီလမှ စောင့်တည်နိူင်ရဲ့လား ။ အမေ တရားစာအုပ်တွေမှ ဖတ်ဖြစ်နေရဲ့လား ။ လားပေါင်းများစွာပါပဲ အမေ ....
အမေရယ် တခါတခါ ဆန္ဒတွေ ၊ ရည်မှန်းချက်တွေ တခဏပဲဖြစ်ဖြစ် တနေရာရာမှာ ချောင်သိပ်ထိုးထည့်ထားလိုက်ချင်တယ် သိလား အမေ ။ အမေ့နားမှာ အပူအပင်မရှိ အမေနဲ့ အတူတူ ဘုရားသွား ကျောင်းတတ် ၊ တခါတလေကျလဲ သမီးက အမေ့ဘေးမှာ တရားစာအုပ်လေးဖတ်ပြ ... အမေကနားထောင် ဘယ်လောက်ငြိမ်းချမ်းလိုက်မလဲနော် ။ အမေရယ်..အဲ့လိုဘဝတွေနဲ့ ဝေးအောင် ဖန်တီးနေတာ သမီးကိုယ်တိုင်များလားမသိဘူးနော် ။ ခုလဲကြည့်လေ ကိုယ်ဆက်တတ်ချင်နေတဲ့ ကျောင်းဆက်တတ်ခွင့်ရတာတောင် သမီး မပျော်နိူင်ဘူးအမေ ... ဆက်လည်းတတ်ချင်တယ် ဆက်လည်းမတတ်ချင်ဘူးအမေ .. ဆက်တတ်ချင်တာ ကိုယ်သင်ချင်တဲ့ ပညာရပ် ၊ ကိုယ်အနှစ်နှစ်အလလ ဖြစ်ချင်လွန်းတဲ့ ဆန္ဒတခု အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်ရဖို့ နီးလာပြီမို့လို့ တတ်ချင်တာ ။ မတတ်ချင်တာက အမေ့နဲ့ထပ်မဝေးချင်တော့လို့ ၊ အမေ့နားမှာ နေချင်လို့ ၊ အမေကို တရားအလုပ်တွေ အေးအေးဆေးဆေးလုပ်နိူင်အောင် အမေ့အလုပ်တွေလုပ်ကူပေးချင်လို့ ။ အမေရယ် ဘာလုပ်ရမလဲ ဘာလုပ်ရမလဲ .....................
ရည်မှန်းချက်တခု အထမြောက်အောင် လုပ်ခွင့်ရတော့မဲ့ အခါမှ အဲ့အခွင့်ရေးကို လက်လွတ်ဖို့ထိလဲ သမီးမစွန့်လွတ်ရဲသေးဘူး အမေ ။ ဒါပေမဲ့ အမေ့ကိုထပ်ပစ်ထားပြီး ကျောင်းဆက်တတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရအောင်လဲ သမီးအသဲကမမာဘူးအမေရယ် ....... ရူးချင်တယ် အမေရယ် .. ရူးချင်တယ် ...အဲ့ဒီအကြောင်းကို တွေးမိတိုင်း မောရလို့ နှလုံးသားတွေ နှုံးနေပြီအမေရယ် ..
ဒီရက်ပိုင်းတွေ အမေ့ကို အိပ်မက် ကလည်း ခဏခဏ မက်သေးတယ်အမေ ။ သမီးနဲ့ဝေးနေတဲ့ အချိန်မှာ အမေ တခုခုဖြစ်မှာ အစိုးရိမ်ဆုံးပဲအမေရယ် ။အမေနဲ့ မနီးနိူင်သေးတဲ့ ဒီတခဏမှာ အမေ ကျန်းမာအောင် နေပေးပါနော် ။ ဘုရားတရားတွေ ပိုလုပ်ပါအမေရယ် ။ အမေ့အတွက် သမီးဘာမှ မလုပ်ပေးနိူင်ခင်မှာ အမေ တခုခုဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးအမေ ။ အမေ ကျန်းမာနေမှ ဖြစ်မယ် ။ စိတ်ရော ကိုယ်ပါပေါ့ အမေရယ် .. ။ မတတ်သာလို့ ဝေးနေတယ် ဆိုရင်တောင် အမေရှိနေတယ် ဆိုတဲ့ အသိက သမီးဘဝကို အဓိပ္ပါယ် ပိုပြည့်စုံစေတယ်အမေရယ် ...
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 1:23 PM2comments
စိုင်းစိုင်းမွန်းရဲ့ အမှတ်တမဲ့ကိုဖတ်ပြီး ကိုယ် စဉ်းစားစရာတွေအများကြီး ရလိုက်တယ် ။ တန့်နေတဲ့ ခြေလှမ်းတချို့ ရှေ့ကို နည်းနည်းရွေ့သွားတယ် ။ အဲ့အတွက် အရင်ဆုံး စိုင်းစိုင်းမွန်းကို ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ပြောပါရစေ။
သူကသူ့ဆရာ ဒီလောက်စောစောစီးစီး ဆုံးပါးသွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်မထားဘူးတဲ့ ။ သူအဲ့သတင်းကြားရတဲ့ အခါမှာ မယုံကြည်နိူင်လောက်အောင် အံ့သြမိတယ်တဲ့ ။ သူ့ကို ကိုယ်ကိုယ်ချင်းစာကြည့်လို့ ရတယ် ။ ခံစားကြည့်လို့လဲ ရတယ် ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့လိုမျိုး ကိုယ်လည်း ကိုယ့်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ သူတွေ ၊ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေ ပြီးတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်.. အဲ့လို အမှတ်မထင် ကိစ္စတွေနဲ့များ ကြူံတွေ့လာရရင် ဆိုတဲ့ အတွေး.....အားလာလား !!! တွေးကြည့်မိယုံလေးနဲ့တင် တကယ့်ကို နေမသိထိုင်မသာပါပဲ ။ ပြီးတော့ တခုခုကိုကြောက်ပြီး စိုးရိမ်လာတယ် ။ ကိုယ့်ရဲ့ အဲ့ဒီစိတ်က တခါတည်း အိမ်ကိုကောက်ပြီး ချက်ချင်း ဖုန်းဆက်မိစေတဲ့ အထိ ကိုယ့်ကိုလွမ်းမိုးသွားတယ် ။ ကိုယ့်မိဘတွေ ကိုယ့်မောင်နှမတွေ ကိုယ့်အသိတွေ နေကောင်းကျန်းမာကြရဲ့လားလို့ ကိုယ်စိတ်ပူမိတယ် ။ ကိုယ်သူတို့တွေ အတွက် ဘာမှမယ်မယ်ရရ လုပ်မပေးလိုက်ရခင်မှာ သူတို့ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စောစောစီးစီး တိမ်းပါသွားမယ် ဆိုရင်၊ ဒီလောကကြီးက ထွက်သွားရမယ်ဆိုရင် .... အဲ့လိုတွေးလိုက်မိတဲ့ တခဏ ကိုယ့်မှာ အချိန်တွေ သိပ်နည်းသွားသလို ခံစားလိုက်ရတယ် ။ အဲ့ဒီအသိက ကိုယ့်ကို မေ့နေတဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေ တချို့ကို မြန်မြန်အကောင်အထည်ဖော်စေဖို့ ကောင်းသော တွန်းအားတခု ကိုပေးတယ် ။ ကိုယ် ရပ်နေရာကနေ ခရီးနည်းနည်းပေါက်သွားတယ် ။ ကိုယ်ရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့လဲ ကြိုးစားနေမိတယ် ။ ဆက်လဲလျှောက်ချင်နေမိတယ် ။ အဲ့ဒါကြောင့် စိုင်းစိုင်းမွန်းကို ကျေးဇူးတင်မိတာပါ ။ တခြားကိုယ့်ကို တပ်လှန့်သတိပေးမဲ့သူတိုင်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိမှာပါပဲ ။
ဟိုးတခါ ကိုယ်ရေးတဲ့ မမေ့အပ်သော အကြောင်းတရား မှာလဲ ကိုယ်ပြောဖူးပါတယ် ။ အဲ့လိုကိစ္စမျိုးက အသက် ငယ်တာကြီးတာနဲ့ မဆိုင်ဘဲ အချိန်မရွေး ဖြစ်နိူင်တယ် ဆိုတာကို သိပေမဲ့ ခုချိန်မှာ တကယ် ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် ကိုယ်မှာ ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်မဖြစ်သေးဘူး ။ ကိုယ် ခံလည်းမခံစားနိူင်ဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်းပေါ့ ။ အဲ့တော့ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက် ထိရောက်တယ် ဆိုတဲ့ စကားလိုပေါ့ လေ ... ကိုယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ ပြင်ဆင်စရာတွေကို စဉ်းစားမိတယ် ။ တချို့ကိစ္စတွေကို ချက်ချင်းအကောင်အထည်ဖော်တယ် ။ အမေ့ကောက်ပြီး မနေမိအောင်လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆုံးမကြည့်မိတယ် ။ အမှန်တကယ်လည်း အဲ့ဒီကိစ္စကြီးက ကြိုပြီးတွေးထားသင့်တဲ့ ၊ ကြိုပြီးတွေးထားရမယ့် ကိစ္စကြီးလေ ။ကိုယ်တို့တွေက အဲ့ဒီ မမေ့အပ်တဲ့ အကြောင်းတရားကြီးကို တခါတခါ မေ့မေ့ထားတတ်တယ် ။ မေ့မေ့နေတတ်တယ် ။ လာမယ်ဆိုတာ သိပေမဲ့ တတ်နိူင်သလောက် ရှောင်ပြေးချင်ကြတယ် ။ ရင်ဆိုင်ဖို့ မကြိုးစားမိတဲ့ အခါတွေလည်းရှိတယ် ။ ဟော ...အဲ့လိုသတင်းမျိုးကို ကြားမိကြမိဆိုတော့မှပဲ မအံ့သြသင့်ပါဘဲနဲ့ အံ့သြမိကြတယ် ။ ထင်မထားတာတွေ ဖြစ်နေတယ် လို့လဲပြောတတ်ကြသေးတယ် ။
တကယ်တော့ အဲ့ဒါတွေ အားလုံး ကိုယ်တို့တွေရဲ့ ပေါ့ဆမှု သက်သက်ပါ ။ ဟုတ်တယ်လေ သူလာမယ်ဆိုတာ အသေအချာကြီးပဲဟာကို ။ သိရက်နဲ့ ကိုယ်တို့တွေ ကိုယ့်ဟာကို မေ့ထားကြပြီး ကြားလိုက်ရတဲ့ အခါမှ အမှတ်မထင်လို့ ထင်မိကြတာ ။ သတင်းဆိုးတခုလို့ မှတ်ယူတတ်ကြတာလေ ။ တကယ်တမ်းကျ အဲ့ဒီ အသေအချာကြီးကို ရှိပြီး အချိန်မရွေးရောက်လာနိူင်တဲ့ သေခြင်းတရားကြီးက ကြီးမှငယ်မှ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တို့ဆီကို သူကြိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကြိုက်တဲ့ အနေအထားမျိုးနဲ့ ဗြုန်းဆိုရောက်လာနိူင်တယ် ။ အဲ့ထက်သေချာပါတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေတောင် အဲ့လောက်မသေချာနိူင်ဘူး ။ အဲ့ထက် သေချာတဲ့ အရာလည်း ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ မရှိဘူးလို့ ကိုယ်ထင်တယ် ။ ဒါတောင် ကိုယ်တို့တွေ ကြိုတွေးတာ ၊ ကြိုပြင်ဆင်တာမျိုးမလုပ်တာဟာ၊ မလုပ်ဘဲ ပျင်းနေမိတာဟာ တကယ်မကြောက်လို့ ၊ တကယ်မတုန်လှုပ်သေးလို့ပေါ့နော် ။ ကိုယ် ကြောက်ချင်တယ် ။ တုန်လှုပ်ချင်တယ် ။ ကြောက်မိအောင် တုန်လှုပ်မိအောင်လည်း နေချင်တယ် .........
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 6:08 PM 1 comments
မထင်မှတ်ပဲ ကြားလိုက်ရတဲ့ သတင်းဆိုးတစ်ခု.....၊
မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် မထင်မှတ်တာတွေက ဖြစ်တတ်လွန်းတဲ့ လောကရယ်.....
အဲဒီအထဲမှာ ဆရာလည်း ပါသွားတယ်တဲ့လား.....။
ကျွန်တော် မယုံကြည်နိုင်စွာ အံ့အားသင့် နာကျင်နေလို့....။
ဒီကနေ့ပဲတဲ့.... ဆရာတစ်ယောက် လောကကြီးကို အရွယ်ကောင်းတုန်း၊ သန်တုန်းမာတုန်းမှာ ကျောခိုင်းထားလိုက်ပုံများ....။
သင်္ခါရဆိုတာ သိပေမယ့် အိုဆရာရယ် ......
ကျွန်တော်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အချိန်က တိုတောင်းပေမယ့် အမှတ်ရစရာ၊ မှတ်သားစရာ အဖြစ်အပျက်တွေ စုံလို့ပေါ့ဆရာရယ်....။
လက်ထောက် ကထိကအဆင့်ကို တက်တာမှ မကြာသေး... ဆရာတစ်ယောက် လောကပေါ်က ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့လား....။
မှတ်မှတ်ရရပါပဲဆရာ.... ထိပ်ဆုံး စတင်သိကျွမ်းခွင့် ရပုံက ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့တယ်နော်....။ ဂျစ်ကန်ကန်နဲ့ ဆရာ့ ပုံကို ကျွန်တော်တို့ ဖရက်ရှာကောင်လေးတွေ သိပ် မကြည်ခဲ့ဘူးလေ....။
မောင်မယ်သစ်လွင်ပွဲတွေလုပ်ရင်း ဆရာနဲ့ကျွန်တော် အတွဲညီခဲ့တယ်နော်....။
အင်္ဂလိပ်မေဂျာမှာ ပြေးကြည့်မှ နှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့ ဆရာထဲက တစ်ယောက်....။
မေဂျာကို ချစ်လွန်းတဲ့ဆရာတစ်ယောက်....။ မန္တလေး ကျောင်းဆင်းဖြစ်ရတာကို ဂုဏ်ယူလွန်းတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်...။ အခုဘယ်ဆီရောက်ပြီလဲ....။
ငယ်ငယ်က ဆိုးတဲ့အကြောင်းတွေကို ဖောက်သည်ချရင်း ငယ်ဂုဏ်နဲ့မလိုက် ပျော်တတ်၊ သည်းခံတတ်တဲ့ ဆရာ....။
ဒေါသကို မြိုသိပ်ပြီး ကွယ်ရာမှာမှ ကြိတ်ပေါက်ကွဲတတ်တဲ့ဆရာ....။
ကျွန်တော့ကို ယုံကြည်စွာနဲ့ စာသင်ဖို့ အားပေးခဲ့တဲ့ဆရာ....။
ကျွန်တော် အားငယ်နေချိန်မှာ လက်တွဲပေးတတ်တဲ့ဆရာ....။
စာတစ်လုံးမှ မသင်လိုက်ရပဲ ဆရာတပည့် အရင်းကြီးဖြစ်ရတာ ကျွန်တော် ဂုဏ်ယူတယ်ဆရာ....။
နှစ်တိုင်း တပည့်တွေနဲ့ တရုံးရုံး.... အလုပ်ကို အတူတူလုပ်တတ်တဲ့ဆရာ....။
အခက်အခဲတွေကြားက မျက်နှာမငယ်ရအောင် လုပ်ပေးတတ်တဲ့ဆရာ....။
ကျွန်တော် ပြန်လာရင် ဆရာ့ဆီလာပြီး ဆရာကြိုက်တဲ့ ဘီယာ အဝတိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးတွေ အခုတော့.......
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက် ဆရာ့ကို ထာဝရ ဦးထိပ်ထား ဂါရဝတရားနဲ့ အစဉ်ဦးညွှတ်နေမှာပါ....။
ကျွန်တော် ပြုဖူးသမျှ ကုသိုလ်တွေကို အမျှပေးဝေပါတယ်....။
ရောက်လေရာက ဆရာတစ်ယောက် သာဓုခေါ်နိုင်ပါစေ....။
ကုသိုလ် အမျှ ..... အမျှ ..... အမျှ ပါ ဆရာ......
ဒီစာလေးနဲ့ ဆရာ့ကို နောက်ဆုံးအကြီမ် ကန်တော့ပါရစေ......
၂၀၀၉၊ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တောင်ကြီး စောဝ်စံထွန်း ဆေးရုံပေါ်တွင် ကွယ်လွန် အနိစ္စရောက်သွားသော တောင်ကြီး တက္ကသိုလ် အင်္ဂလိပ်စာဌာန လက်ထောက်ကထိက ဦးမောင်မောင်လေးအား ရည်စူး၍ ရေးသားသည်....
ရေးသားသူ- Anonymous Time 6:13 AM0comments
ခြေချဖို့ " မြေ "တခဏငှားပါ။
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 9:38 PM 1 comments
ခင်ဗျားသိပြီးသား သင်္ခါရတွေ ပါပဲ
ဟော ဒီအခန်းလေး ထဲမှာ
အခင်း အကျင်း နည်းနည်းမှ မပါ။
အိုးတိုးအမ်းတမ်း လွဲဖယ် စေ ရုံလေး
ငြီးငွေ့ဖွယ် ဒီအနံ့ အသက် မျိုးမှာ
အလှအပ သက်သက် ခင်ဗျားအာရုံတွေ
သာမန်ကာလျှံကာ အဖြစ်မျိုးထက် လွန်ပြီး
ကြိုဆို နှုတ်ဆက်လိုက်ဖို့ ခက်တဲ့
ရေးသားသူ- ကူးလွေ့ Time 8:18 AM0comments
ကိုယ် ဒီနေ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းနဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး အလာပ သလာပပေါ့။ကိုယ်တို့ အဲလို ပြောနေဆိုနေကြတုန်း သူ့ဆီကို second call တခု ၀င်လာတယ် ။ သူ့ အသိ သူငယ်ချင်း တယောက် ဆုံးပါးသွားကြောင်း သတင်းပေးတာတဲ့။ ကိုယ့် သူငယ်ချင်းကပြောတယ် . .သူ ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ ရွယ်တူ သက်တူ မိတ်ဆွေတွေ တယောက်ပြီး တယောက် ဆုံးပါးသွားတဲ့သတင်းတွေချည်း ဆက်တိုက်ဆိုသလို ကြားနေရတော့ သူတောင် နဲနဲတုန်လှုပ်လာတယ်တဲ့ ။ အင်းး တုန်လှုပ်သင့်ပါတယ် ။ ဟုတ်တယ်လေ ..တကယ်တော့ အဲ့ဒီသေခြင်းတရား ဆိုတာကြီးဟာ သူတို့ဆီမှာတင်သာ ရှိနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်တို့ဆီကိုလဲ အချိန်မရွေးလာနိုင်တယ်။ ကိုယ်တို့တွေ တနေ့ မလွဲမသွေ ကြုံတွေ့ကြရမဲ့ အကြောင်းတရားကြီးပဲလေ။ မနက်ဖြန် လဲရောက်လာနိုင်တယ် ။ ဒီနေ့ ဒါမဟုတ် ခဏနေ ဆိုလဲ ဖြစ်နိုင်ချေမရှိဘူးလို့တော့ ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးလေ။
သေခြင်းတရား ဆိုတာ လူတိုင်း မလွဲမသွေ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ ကြရမဲ့အရာ ဆိုတာ မသိတဲ့သူမရှိဘူး ဆိုပေမဲ့ သူ့လောက် လူတွေ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် အထားခံရတဲ့အရာလဲ မရှိဘူးရယ်။ ခလုတ်မထိ သေးသ၍ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် အထားခံရတဲ့ထဲမှာ သူကထိပ်ဆုံးကပါတယ်။ ကိုယ်တို့တွေဟာ နာရီဝက် တနာရီ လောက်သာ ရုပ်လုံးပြပြီး ပြီးသွားမဲ့ပွဲလေးတခု တက်ဖို့အတွက်ကျ ခေါင်းမှာပန်မဲ့ပန်းက အစ ဖိနပ်အဆုံး ပွဲမတိုင်ခင် တပတ် ဆယ်ရက် အလိုကတည်းက ခေါင်းမီးတောက်အောင်စဉ်းစားပြီး ဝက်ဝက်ကွဲ ပြင်လိုက်ဆင်လိုက်ကြတာ။ ဟော... တဘဝလုံး ရုပ်လုံးပြပြီး အချိန် အရှည်ကြီးတက်ရမဲ့ပွဲ အတွက်ကျ စနစ်တကျ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ဖို့ကို နေ့ရွေ့ ညရွေ့နဲ့ ပျင်းရိ လေးတွဲ့နေလိုက်ကြတာ..ကိုယ်အပါအ၀င်ပေါ့လေ။
အဲ့တော့ ကိုယ်တို့တွေရဲ့ ပျင်းရိလေးတွဲ့မှု တွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးမဲ့ တွန်းအားသာဖြစ်စေမယ် ဆိုရင် သူတင်မကဘူး ကိုယ်တို့ အားလုံး တုန်လှုပ်သင့်တယ်၊ ကြောက်သင့်တယ် လို့ ကိုယ်တော့ထင်တယ်။ သေချာ စဉ်းစားကြည့်ရင် ကိုယ်တို့တွေဟာ တနေ့တနေ့ ဘဝအတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိသလိုလို ၊ အရေးသိပ်ပါသလိုလို ဆိုတဲ့ တကယ့်တကယ့်မှာ ပြီးရင်ပြီးသွာမဲ့ ဘာမှအရေးမပါတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ နပန်းလုံးပြီး အချိန်တွေ ကုန်နေကြတယ်။ ဘဝအတွက် တကယ် အရေးပါတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေအတွက်ကျ အချိန်တွေပေးဖို့ ရှားပါးလိုက်ကြတာ ။ တရက် ၂၄နာရီကပဲ နည်းနေသလိုလို .....
ကိုယ်မကြာမကြာ စဉ်းစားမိတယ်။ ဘာမှသာ မဟုတ်တာ အခု ကိုယ့်အသက်က ဆယ်စုနှစ် သုံးစုနားမှာ .. အကယ်၍ ကိုယ့်ရဲ့သက်တမ်းက ဆယ်စုနှစ် ခြောက်စုဆိုရင် ခုပဲတဝက်ကျိုးနေပြီ။ ကဲ..ကျိုးခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့ သက်တမ်းတဝက် ကိုယ့်ဘဝရဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှု့ အစစ်အမှန်အတွက် ကိုယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲ၊ ကိုယ်ဘာတွေလုပ်နေခဲ့သလဲ ။ စဉ်းစားကြည့်ရုံလေးနဲ့တင် အားတွေအင်တွေ မဲ့ကုန်တယ်။ ကိုယ့်ဘဝကို အေးချမ်းစွာ ချုပ်ငြိမ်းနိုင်စေဖို့ရာ ကိုယ်မှာ ဘာမှ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘူး။ ပြန်တွေးတိုင်း လောဘ ၊ ဒေါသ ၊ မောဟတွေနဲ့လောင်မြိုက်နေတဲ့ အမဲရောင် ဘဝကြီးကပဲ စက်ဆုတ်စွာ ပေါလောပေါ်ပေါ်လာတယ်။ ဟုတ်တယ် ...ခုချိန် ဖြုတ်ကနဲ ကိုယ်သေမယ်ဆိုရင် ဆိုတဲ့အတွေးဟာ တွေးကြည့်ရုံနဲ့တင် ကိုယ့်ရဲ့ မလုံလောက်သေးတဲ့ ပြင်ဆင်မှု တွကို မီးမောင်းထိုးပြနေတယ်လေ။ တကယ်တော့ အဲဒါတွေ အားလုံးဟာ ဘယ်သူ့အပြစ်မှတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးယူထားတာတွေ ချည်းပဲမို့ အားလုံး ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုယ်ချည်းပါပဲလေ ။
လူတွေလဲ ခက်တော့ ခက်သားနော် ။ မငြိမ်းချမ်းရာ မငြိမ်းချမ်းကြောင်းတွေကို ဖန်တီးယူနေတာလဲ ကိုယ်တို့တွေပဲ ။ ငြိမ်းချမ်းရာ ငြိမ်းချမ်းကြောင်းတွေ လုပ်ဖို့ မကုန်နိုင်တဲ့ ဆင်ခြေတွေ အမျိုးမျိုး ပေးနေမိတာလဲ ကိုယ်တို့တွေပဲ။ ဟော.. သေခြင်းတရား ဆိုတဲ့ အသံလေးများကျ သဲ့သဲ့လေး ကြားလိုက်မိတယ် ဆိုရင်ပဲ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ မဟားဒရား ကြောက်အားပိုနေလိုက်ကြတာ .. ဘယ်လောက်များ ဟာသမြောက်လိုက်တဲ့ ပြကွက်လဲနော် ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း ကြုံလာပြီ ဆိုရင်တော့ ကိုယ်တို့တွေ ရယ်နိုင်မောနိုင်မယ်လို့ ကိုယ်မထင်ဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ နှောင်းနောင်တ တွေလဲ ရလို့ပေါ့ ။ ဘယ်မှီတော့မတုန်း အဲဒီ ချိန်ကျမှတော့ ။ ကိုယ်ကဖြင့် ဘာမှမပြင်ဆင်ထားပါပဲနဲ့များ အဲဒီချိန်ကျမှ ကြောက်နေလို့ကော ဘာထူးမတုန်းတဲ့လေ ။ ဘယ်သူမပြု မိမိမှု တဲ့ ... ကိုယ်တို့ မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဖြစ်မလာတဲ့ အကြောင်းတရား တခု အတွက် အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပူဆွေး ဝမ်းနည်းနေလို့ ကော ? တပူပေါ်နှစ်ပူဆင့် ဆိုတာမျိုးက လွဲလို့ ဘာရမှာလဲနော် ။ ဟင်း.....တွေးကြည့်ရုံနဲ့တင် .....
အဲ့တော့ ကိုယ်တို့တွေ ဘာလုပ်ကြမလဲ ။ လုပ်စရာရှိတာ တခုပဲ သိပ်မများပါဘူး ။ တကယ်ကြောက်ရင်တော့ အဲ့ဒီ သေခြင်းတရား ဆိုတာကြီးကို မမေ့မလျှော့ နှလုံးသွင်းပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ပါပဲ။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ နေ့ရွေ့ ညရွေ့ ရွေ့နေကြတာတွေကို ရပ်တန်းကရပ်ရမှာပေါ့။ သေခြင်းတရားဆိုတာက ကြီးသည် ငယ်သည် ဆိုပြီး ရွေးနေမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ အဲ့တော့ မြတ်ဗုဒ္ဓ ဆိုခဲ့သလို ဆန့်သောလက် မကွေးမှီ ၊ ကွေးသောလက် မဆန့်မှီ ပေါ့။ နောက်ဆုံးတခု ကတော့ တခဏတာ ငြိမ်းချမ်းသာယာမှု နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ပြီး လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မီးလောင်တိုက် မသွင်းမိစေဖို့ပဲပေါ့ ။ အင်း......အတွေးတွေ အသိတွေကတော့ အထစ်အငေါ့ မရှိ၊ ချောနေအောင် သိပ တွေးတတ်ပ ။အဲလို သိနေရုံ ၊ တွေးတတ်ရုံလေးနဲ့လဲ ရလဒ်ကောင်းက မထွက်ဘူး ဆိုတာ မမေ့နဲ့ ညီမလေးရေလို့လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခဏခဏဆုံးမမိပါတယ်။ ခုလိုစာလေးရေးရေးပြီးတော့ပေါ့..အင်မတန် ရိုးစင်းသော အင်မတန် ကောင်းသော လုပ်ရပ်ကလေးကို နေ့စဉ်နှလုံးသွင်းမိဖို့ ကိုယ်လဲ ကြိုးစားနေသလို ၊ ကိုယ့်မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ ကြိုးစားစေချင်တာနဲ့ ဒီစာလေးရေးမိတာပါ။
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 4:03 PM0comments
ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ..။ သေသွားတဲ့ အိမ်က ကြောင်ကလေးအကြောင်း အလွမ်းစာပါ။ အတော်လေးကို လိမ္မာ ပြီး လူနဲ့ အင်မတန် နီးစပ်တဲ့ ကြောင်ကလေးပါ။စမွေးခါစကတော့ နှစ်ကောင်ပေါ့..။ ညီအစ်ကို နှစ်ကောင် ဆိုပါတော့ဗျာ..။တစ်ကောင်က တော့ အရွယ်ရောက်ပြီး မကြာခင် ပျောက်သွားလေရဲ့။ သူတို့ရဲ့ ငယ်ဘ၀ရာဇ၀င်ကို ကျွန်တော် မသိမှီလိုက်ပါဘူး။ သူတို့ နှစ်ကောင် အိမ်စရောက်တော့ ကျွန်တော်က အဝေးမှာ..။ ကျွန်တော် အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန် မှာတော့ တစ်ကောင်ပဲကျန်တော့တယ်။ အခုရေးမှာက အဲဒီကောင် အကြောင်း ဆိုပါတော့။
ဒီကောင်က အမေ့ရဲ့ အချစ်တော်ပါ။ အမေချစ်အောင်လည်း သူက တတ် သကိုးဗျာ။ အစာတောင် အမေကျွေးမှ ကောင်းကောင်းစားတာ။ ဗိုက်ဆာရင် တညောင်ညောင် အသံလေး ပေးပြီး အမေ့ကိုရှာတတ်တယ်။တစ်ခါတစ်လေ အမေ တီဗွီကြည့်နေရင် ခြေထောက်နားသွားပြီး ပွတ်သီးပွတ်သပ်နဲ့ ၊ ခြေချောင်းတွေကို ကိုက်ပြီး ထမင်းကျွေးဖို့ သတိပေးတတ်သေးတယ်။စားရင်လည်း အစားက ရွေးသေးတယ်။ ပေါက်ကရ ကြုံတာနဲ့ ကျွေးလို့မရဘူး။သူ့ကို ကျွေးဖို့ ပုဇွန်ခြောက် သပ်သပ် ၀ယ်ထားပေးရတယ်။ တခါတစ်လေ ပုဇွန်ခြောက် ကုန်သွားလို့ ဆိုရင် ထမင်းကောင်းကောင်းမစားတော့ဘူး။ ဒီလို အချိန်ဆို ကျွန်တော်ကတော့ အ၀ယ်တော်ပဲ။ နီးရာဆိုင်ကနေ အသားခြောက် အထုပ်သေး တစ်ခုခု သွားဝယ်ပေးရတယ်။မဟုတ်ရင် သူ့ကြောင်ကလေး ထမင်းမစားရင် အမေ့ခမျာလည်း မလန်းဆန်းရှာဘူးကိုး။
နောက်ပြီး ဒီကောင်က အိပ်ရင်လည်း အများအားဖြင့် အမေ့နားပဲ အိပ်တတ်တယ်။ ပြီးတော့ သူအိပ်ပုံက အဆန်း။ ခွေမအိပ်ဘူး။ လူတွေအိပ်သလို ပက်လက်ကြီး ခြေပစ်လက်ပစ် အိပ်တတ်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ လည်း ဘေးတစ်စောင်းအိပ်တယ်။သူ့ ကို ကလေး ငယ်လို ချီပြီးသိပ် ရင် အရမ်းကြိုက်တတ်တယ်။ အမေဆို သူ့ကို အဲလို ချီ ပြီး သိပ်နေကြ။ ဒါကြောင့် သူက အိပ်ချင်လာရင် အမေ့ဆီကို ပဲသွားတယ်။တစ်ခါတစ်လေ အမေ မီးဖိုချောင်ထဲ အလုပ်ရှုပ်နေရင်တောင် သူက တညောင်ညောင် အသံပေးလိုက်တာနဲ့ အမေကလည်း လာလာ ဆိုပြီး လက်ဆန့်ပေးလိုက်တာပဲ။ အဲဒါမျိုးများဆို အမေ့ပေါ်ကို ခုန်တက်ပြီး ကျကျ နနကို အိပ်တော့တာ ကလား။
သူက လူနဲ့ အိပ်ရတာကို အင်မတန် ကြိုက်တယ်ဗျ။ ညအစောပိုင်းဆို အမေ့နားသွားအိပ်တယ်။ ည တစ်ရေးနိုင်းဆို အပေါ့ အပါးက ထသွားတတ်သဗျ..။ အဲလို အချိန်ဆို လူကို နိုးတတ်တယ်...။ တံခါး ထဖွင့်ပေးလိုက်ရင် ခဏထွက်သွားရော...။ တစ်ခါတစ်လေ အပြင်မှာကြာနေလို့ မစောင့်ပဲ တံခါးပြန်ပိတ်ပြီး အိပ်နေရင်လည်း အထဲဝင်မယ်ဆို အပြင်ကနေ အသံပေးတယ်...။ ကြုံသလို မ၀င်လာတတ်ဘူး။အဲဒီတာဝန်ကိုလဲ အမေပဲ အများအားဖြင့်ယူ ထားတာပါပဲ။တစ်ရေးနိုး အပြင်ထွက် အပေါ့အပါးသွားပြီးရင် ကျွန်တော့်ဆီ လာတောင်းအိပ်တတ်တယ်။ တောင်းအိပ်တာ ဆို တာ တစ်ကယ်ကို တောင်းအိပ်တာ။ ခေါင်းရင်း နားကို လာပြီး တညောင်ညောင် အသံ တိုးတိုးပေးတတ်တယ်။ မနိုးမချင်း တက်မအိပ်ဘူးဗျ။ အဲဒီနားမှာပဲ စောင့်နေတာပဲ။ နိုးလာလို့ ဂွမ်းဖုံကလေး အသာဟပြီး လာလာ ဆိုမှ တက်လာတာ။ သူက အိပ်ရင် ချိုင်း နားမှာ ခေါင်းကလေး မှေးတင်ပြီး အိပ်လေ့ရှိတယ်။ ပိုနွေးလို့လား မသိပါဘူး။ ခေါင်းကလေး ကိုမှေးပြီး ခြေပစ် လက်ပစ်နဲ့ အကျ ကို အိပ်တော့ တာများ အရမ်း ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။တစ်ခါတစ်လေများ လျှာကလေး တစ်လစ်ကို ထွက်လို့။
ပြီးတော့ ဒီကောင်က ကြောင်ထီးသာ ဖြစ်တာ ကြွက်တော့ ခုတ်တယ်။ ကြွက် ခုတ်လာပြီးရင် လူတွေရှေ့ ကို အမြဲယူလာပြီး ...ဆော့ တတ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကများ ၀ိုင်းကြည့်ပြီး အသံထွက်အားပေးရင် အကွက်မျိုးစုံနဲ့ ဂျွမ်းပြန်နေအောင် ဆော့ တော့တာပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ ဘယ်သူမှ စိတ်ဝင်တစား မကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ ၀တ်ကျေတန်းကျေလောက် ဟို တို့ ဒီပုတ် လုပ်ပြီး ထားခဲ့တော့တာပဲ။ စားချင်မှ စားတယ်။ စားရင်လည်း ခေါင်းရယ်၊ အမြီးရယ်၊ အရေခွံရယ်၊ ကလီစာရယ်ကို ဘယ်တော့မှ မစားပဲ ချန်ထား တတ်သဗျ။ တစ်ခါတစ်လေများ ဆို နှစ်ကိုက်လောက်ကိုက်ပြီး ထထွက်သားတတ်လေရဲ့။ ကျွန်တော်တို့က နောက်က လိုက်ကောက် လိုက်သိမ်းပေးရတတ်သေးတယ်။
ဒါပေမယ့် သူ့မှာ အားနည်းချက် တစ်ခုတော့ ရှိတယ်ဗျ။ အမြင့်ဆို ရင် တက် ပြီးတော့ ပြန်မဆင်းတတ်တာပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ သစ်ပင် တက်ပြီး ပြန်မဆင်း တတ်ရင် ဒါမှမဟုတ် ခေါင်မိုးပေါ်က ပြန်မဆင်းတတ်ရင် ကျွန်တော်တို့မှာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ သူ ပြန်ဆင်းလာအောင် ဖြေရှင်းပေးရလေ့ ရှိတယ်။ အများစုကတော့ ခေါင်မိုးပေါ်တက်တက် ပြီး ပြန်မဆင်းတတ်ပဲ တညောင်ညောင် လုပ်တတ်တာပဲဗျာ....။ ဒီအခါဆို ကျွန်တော်တို့မှာ စကော တချပ်ကို တစ်ယောက်က ခေါင်းပေါ် ကနေမြှောက်ပြီး တစ်ယောက်က သူဆင်းလာအောင် မြူရတယ်။ ဒါတောင် ကိုယ်တော်ချောက အမေ မပါရင် တော်တော်နဲ့ မဆင်းဘူး။ အဲဒီလို။ရန်လည်း မဖြစ်တတ်ဘူးဗျ..။ အကောင်သာကြီးတယ် အလည်သွားရင် သူများ ဆော်ပလော်တီးတာ ခံလာရတာ ချည်းပဲ။ ပြန်လာရင် ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက် ပေါင်းစုံကို အမြဲ မရိုးရအောင် ယူလာတယ်။ အမေ့မှာ ဆေး မှုန့်လေးတွေ နဲ့ သူ့ တစ်ကိုယ်လုံး လှန်လှောရှာဖွေပြီး ဆေးထည့်ပေးရ သဗျ..။ ဟတ်ဟတ် တစ်ကယ့်ကို အာဂကြောင်။
နောက်တော့ ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြောင်း တော့ အဲဒီပြောင်းသွားတဲ့နေရာလေးမှာပဲ သူ နေလို့ထိုင်လို့ အသားကျပြီး သိပ်မကြာခင်လေးမှာပဲ ပျောက်သွားရှာတယ်။ အမေ့မှာ သူ့ကြောင်ကလေး ပြန်လာနိုး ပြန်လာနိုးနဲ့ ထမင်းပန်းကန်လေး ပြင်ပြီး စောင့်နေရှာတာ။ ည တရေးနိုးရင်လည်း သူ့ကြောင်ကလေး လာအော်ပြီး နိုးလေမလားလို့ ခဏ ခဏ စောင့်စောင့်ကြည့်တတ်လေရဲ့။ကျွန်တော်လည်း တော်တော် လေးကို စိတ်မကောင်းဘူး...။ သံယောဇဉ်တွယ် မိသကိုးဗျာ။ဘယ်လောက်အထိလည်းဆို တစ်ခါတစ်လေ ကြောင်တစ်ကောင်လို့တောင် မမြင်တော့တဲ့ အထိပဲ..။အမေ့နဲ့ သံယောဇဉ်ကတော့ ပိုပြီး နက်ရှိုင်းသပေါ့ဗျာ...။ သို့ပေမယ့်လည်း ကံဆုံ သလောက်ပဲပေါ့။နောက်နောင်အခါမှာ တရိစ္ဆာန် မဖြစ်ပဲ ကောင်းရာ မွန်ရာ မှာ ရောက်ပါစေလို့။ ဒီစာလေး ရေးဖြစ်သွားတဲ့ကြောင်းရင်းကလည်း ကျွန်တော် ကြောင်လေ ကြောင်လွင့်တွေ ပေါများလွန်းတဲ့ အရပ်တစ်ခုမှာ ရောက်နေတုန်း ပြန်လွမ်းမိတဲ့ အပိုင်းအစလေးတွေကို သီကြည့်ဖွဲ့ကြည့် တာသက်သက်ပါပဲ....။ဒီလိုနဲ့ ဒီ ကြောင် အလွမ်းစာလေးကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ- ကူးလွေ့ Time 1:25 PM0comments